Iza i "Oscar", na ny tantaran'ny sarivongana malaza
Ilay sarivongana Oscar malaza dia manana tantara manankarena feno angano sy honohono. Alohan'ny aminao - ny tantara mampiady hevitra sy mahatalanjona momba ny loka sarimihetsika malaza. Ny loka voalohany amin'ny tantara dia mety ho an'ny alika.
Ny antsipiriany 13 izay mety tsy ho fantatrao momba ny jamba
Ny olona tsirairay, fara fahakeliny, indray mandeha tamin'ny fiainany dia niatrika toe-javatra majeure mahery mifandraika amin'ny fahaverezan'ny fahitana mahita vetivety. Izany dia vokatry ny singa sy ny fahatapahan-jiro. Alao an-tsaina hoe misy rivo-doza any amin'ny faritra misy anao izay ...
Moa ve nisy tena moby dick?
Mazava ho azy, ilay trozona goavambe, mpandoa ra ary fotsy hoditra rehetra, Moby Dick avy amin'ilay tantara nosoratan'i Herman Melville no noforonina nofinofy tamin'ny tantaram-pitiavana amerikana farany. Na izany aza, toy ny mahazatra dia nanjary aingam-panahy ho an'ny tantara foronina ny zava-misy. Angano na ...
Nahoana ny kafe dia mety hiteraka kibo?
Ny olona tsy mitsahatra miresaka momba ny fomba tsy ahafahany miaina raha tsy misy kaopy kafe maraina. Na izany aza, tsy misy na iza na iza milaza fa ity kaopy kafe ity ihany dia mifoha tsy ianao ihany, ...
Marina ve fa tsy misy na inona na inona eo amin'ny fiainana?
Ny sain'olombelona afaka mandray na inona na inona afa-tsy korontana mahatsiravina. Tsy misy afaka miaina fiainana voarindra tanteraka feno korontana. Eny, ny efitranon'ny tanora mikorontana dia mety ho tsara tarehy ...
10 aloha ny fisian'ny demony
Dementia dia mihoatra noho ny fahaverezan'ny fahatsiarovana tsotra fotsiny. Ka ahoana no ahalalanao ny aretina amin'ny fotoana? Ary inona no atao hoe dementia? Raha ny marina dia tsy aretina akory io. Azontsika atao ny milaza fa ity dia ...
Mpanimba halatra amerikana vaovao: tanjaka sy fahalemena
Toa vy izany ary toa hafahafa fa tsy mandrahona, fa ny mpanao sambo ny orinasa General Dynamics, izay namorona tao amin'ny Bath Iron Works any Maine, fahagagana amin'ny teknolojia izany, manome toky izy ireo ...
Samy efa naheno sambo iray antsoina hoe Flying Dutchman, ilay sambo matoatoa malaza indrindra eto an-tany. Saingy lavitra ny iray ihany izy io. Ny matoatoa sambo nilentika indray mandeha dia lohahevitra malaza, ...
Ny fantsika lava indrindra eran-tany: ny rakitsoratra Guinness vaovao
Lehilahy iray avy any India no niditra tao amin'ny Guinness Book of Records nefa tsy nanao na inona na inona mihitsy. Tsy nihinana alika mafana be dia be izy, tsy nitsambikina avy eny ambony tafon'ny tranobe iray. Izay rehetra ...
Ahoana ny fomba hamboly zaza matoky tena: torohevitra Xnumx ho an'ny ray aman-dreny
Ny fahatokisan-tena no fanomezana lehibe omen'ny ray aman-dreny ny zanany. Noho izany, tokony jerena manokana ity olana ity. Raha ny filazan'ny psikology dia tsy matoky tena ...
Inona no nataon'i Beethoven rehefa tsy naheno ny feony izy?
Teraka 245 taona lasa izy, fa ny zava-doza ateraky ny fahaverezan'ny fihainoana kosa dia mbola mahaliana ny mpitia mozika ihany. Ny tsiambaratelon'ny fahaterahan'i Beethoven Na dia taorian'ny taonjato maro aza dia misy tsiambaratelo lehibe iray momba ny fiainan'i Ludwig ...
Saripikan'i 6 avy amin'ny sarimihetsika voatifitra amin'ny mpilalao mozika tena izy
Tsy mitombina ny mino fa raha mpilalao sarimihetsika milalao olona mamo iray dia tena nisotro kely izy alohan'ny handraisana azy. Ny fiasa mahay dia maharesy lahatra ny mpijery fa nisy maniaka mpandatsa-drà niseho teo alohan'izy ireo, na ...
10 zava-misy mahatalanjona momba ny feso
Ny olon-dehibe sy ny ankizy dia tia feso. Ireo biby mampinono ireo dia toa marani-tsaina tokoa, ary misy vokany ara-pahasalamana aza miaraka amin'izy ireo! Mianara zava-misy mahaliana folo momba azy ireo. Maherin'ny telopolo ny karazana feso feso. Feso ...
Taratasy ho an'ny zanany lahy 10 taona. Vakio amin'ny zanakao izany!
Ity no taratasy tian'ny reny rehetra soratana izay tsy afaka manazava amin'ny teny ny fahamarinana mangidy sasany. Saingy mila aseho izy ireo indraindray, ary tsara kokoa tara noho ny tsy. Fa maninona no nanomboka daholo? Ankehitriny ...
4 dia mariky ny olona mihatsaravelatsihy izay toa mahafinaritra anao
Indraindray isika dia tsy mahazo ny hevitry ny olona manodidina antsika ary manandrana ny tsara indrindra hikarakarantsika azy ireo, na dia tsy mitovy aza ny valiny omena antsika. Indraindray isika mahita ireo fiasa izay amin'ny ...
Ny Smart app dia mamela anao mandanja ny zavatra amin'ny iPhone 6s
Apple dia namolavola teknolojia 3D Touch ho an'ny fifandraisana an-tarobia mora kokoa amin'ny tompony. Na izany aza, tamin'ny fampisehoana ny iPhone 6s sy iPhone 6s Plus dia tsy nisy na dia iray aza voalaza momba ...
Ahoana ny fanesorana ny solaitrao amin'ny fiara?
Mpamily maro no mametraka sticker amin'ny fiarany izay afaka maneho zavatra rehetra. Indraindray ireo sticker ireo dia avy amin'ny mpanamboatra azy mivantana, fa na izany na tsy izany, mety tianao ny zavatra toy izao ...
25 zava-misy mahagaga momba zebra
Zebras dia anisan'ny zavaboary tsara tarehy indrindra monina any Afrika. Fantatry ny olona ny dian-kapoka malaza amin'ny vatany ary tsy afaka manapa-kevitra amin'ny fomba inona izy ireo ny fanontaniana: fotsy fotsy misy dian-kapoka mainty ve sa ...
Famonoana ny "Antonov", na ny Faran'ny indostrian'ny fiaramanidina Okrainiana
Ny didim-panjakana tamin'ny 26 Janoary dia nankatoavina ny fanafoanana ny olana momba ny fananganana fiaramanidina Antonov. Ity antontan-taratasy ity dia nahatonga fahatsapana mahakivy ho an'ny mponina marobe ao Okraina sy ny habaka taorian'ny Sovietika, na eo aza ny fanazavana maro izay ...
Nahoana ny ankizivavy mahafatifaty dia tsy maninona: antony 5
Misy hevitra tsy misy farany momba ny antony mahatonga ny zazavavy mahaleo tena, mahomby ary tsara tarehy matetika kokoa noho ny tsy mpitovo. Toy ny ankamaroan'ny zava-miafina amin'ny fiainantsika, tsy misy valiny tokana ihany koa momba an'io. Matetika ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 908 Next Page
52 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,758.